Inkqubo yokupeyinta i-Watercolor: Sebenzisa i-Wax ukugcina uMhlophe
Ngokwesiqhelo, upeyinta iphepha elimhlophe lamanzi. Kwaye ngokufanelekileyo, ugcina umhlophe wephepha ukuze usebenze njengomhlophe kumzobo. Oko kukuthi, upeyinta iindawo ezimhlophe, ushiya iphepha elimhlophe ukubonisa.
Nangona ungathenga ipeyinti emhlophe ye-watercolor, ijongeka ichalky encinci, kwaye ngaphandle kokuba ujonge inkangeleko engeyiyo eyendalo, kuya kufuneka uyiphephe ukuyisebenzisa. I-Watercolor ihluke kakhulu kwioli okanye i-acrylic yokupenda apho ipeyinti isetyenziselwa indawo ezimhlophe.
Iziphumo ezibandayo ze-eeze
Isicwangciso esihle ukupeyinta iindawo ezikhanyayo kuqala kwaye uqhubeke ngemibala emnyama ngokulandelelana. Sebenza ukusuka ekukhanyeni ukuya ebumnyameni.
Elinye iqhinga lokugcina umhlophe wephepha lakho kukusebenzisa i-wax. I-wax iyamelana ne-watercolor, ke ukusebenzisa ikhrayoni emhlophe okanye ikhandlela yindlela ekhawulezayo nelula yokugcina encinci emhlophe xa upeyinta. Yitsho ukuba awufuni ukuya kumzamo wokupeyinta ujikeleze indawo yokuqaqambisa encinci kwintyatyambo. Ukuchukumisa nje ikhrayoni kugcina ichaphaza, kuhlala kungabonakali, kwaye kukugcina ungadingi sandla sizinzileyo sokupeyinta ujikeleze lo mboniso.
Nantoni na ethintela okanye engavumiyo ukupeyinta yaziwa njenge xhathisa , kunye ne-wax lolunye uhlobo lokuxhathisa. (I-wax enemibala isebenza njengesixhathiso, ngokunjalo, kodwa ngokucacileyo ishiya indawo enemibala ephepheni, ngaphandle kokuba leyo yimpembelelo oya kuyo, qiniseka ukusebenzisa i-wax emhlophe.)
Ukugcina umhlophe kwipeyinti nge-wax wax, landela la manyathelo:
1. Fumana ikhrayoni emhlophe okanye ikhandlela elimhlophe.
2. Zoba iphepha eline-watercolor usebenzisa ikhrayoni okanye ikhandlela.
Uyilo lwakho kunzima ukulujonga - alubonakali enyanisweni. Ukuba ucebisa iphepha, ungabona ngokugqitywa kwe-matte apho ufake khona i-wax.
Kwipeyinti yokwenyani, ungabeka i-wax naphi na apho ufuna ukugcina ukuqaqambisa, mhlawumbi ngokuqaqamba kwiliso okanye kwi-sunspot kwigqabi. Vala nje apho ufuna umhlophe, kodwa khumbula ukuba i-wax ihlala ephepheni. Ukuba ufuna ukuba iphepha licoceke emva kwexesha, sebenzisa ulwelo olubambayo ngoba iyaxobuka emva kokuba ugcine indawo emhlophe.
3. Sebenzisa ibrashi oyikhethileyo, peyinta ngaphezulu ngepeyinti exutywe nayo nayiphi na imibala.
Ewe! Uyilo lwakho oluyimfihlo luyatyhilwa.
Gcina la manqaku engqondweni xa usebenzisa i-wax ukugcina imhlophe kwii-watercolor zakho:
Ubumnyama bepeyinti oyisebenzisayo ngaphezulu kwe-wax, kokukhona uyilo lwakho luya kucaca ngakumbi.
Iphepha eligudileyo liphethe umgca we-wax ongcono. Ukuba iphepha lakho libhalwe ngenene, i-wax ayinakho ukuloba iphepha ngokupheleleyo. Ukuba kuphela umphezulu wephepha elibunjiweyo ufumana i-wax, isiphumo sesinye isimbo esinamabala, esinokuba sisiphumo osifunayo.
I-wax ihlala ephepheni kuba ayinakususwa. Ngokuqinisekileyo ayibonakali ngaphandle kokwakhiwa kwe-wax. Ukuba isetyenziswe kwimali encinci, isenokungabonakali kwaphela.
isebenzisa ubisi lwe-magnesia
iziphumo ebezingalindelekanga ze-estradiol 2 mg
Saint johns iziphumo zewart
Amaxesha okufunyanwa kovavanyo lweziyobisi gc ms
Ungayisebenzisa njani i-viagra yezona ziphumo zihle
Ngaba azo zenza i-pee orange yakho
yi-archaea prokaryotic okanye i-eukaryotic